Koox Sheegatay Inay Daacish Yihiin oo Qandala Qabsatay
Wararka naga soo gaadhaya degmada Qandala ee Gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in halkaasi ay saaka qabsadeen maleeshiyo dadka degaanka u sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish.
Warar aanu ka helnay dadka magaalada ayaa sheegay in maleeshiyadaais ay calan ka taageen dhisme ku yaalla magaalada. Wax iska horimaad ah kama dhicin magaalada, mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa la sheegay inay ka baxeeen magaalada.
Wararku waxay intaas ku darayaan in odayaasha magaaladu ay la kulmeen maleeshiyadaasi ayna u sheegeen inay ka abaxaan magaalada balse ay maleeshiyada Daacish taabacsan ku adkaysteen inaysan meelna u socon.
Maleeshiyadan waxaa hoggaamiya wadaadka lagu magacaabo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo sanand ka hor ku dhowaaqay inuu ka baxay ururka Al-Shabab uuna ku biiray Daacish.
Warbixin warkan ku saabsan waxa Boosaaso ka soo dirtey Faadumo Yaasiin.
Dhageyso Qandala oo Daacish Qabsatay